Ghost Inoshandura Michina Yekugeza Inorema Yakazara MuViral Vhidhiyo
musha	Horror Varaidzo Nhau	Ghost Inoshandura Michina Yekugeza Inorema Yakazara MuViral Vhidhiyo
Tichakutendera kuti usarudze kuti simba racho nderomusikirwo here kana kuti kwete.
by Timothy Rawles February 13, 2022
by Timothy Rawles February 13, 2022 12,357 maonero
Hapana anoda kuita mabasa epamba zvishoma pane zvese kana wafa. Asi tarisa vhidhiyo pazasi. Zvinoita sekunge rimwe simba renyika riri kuwana nyaya nezuva rekuwacha.
Mushandisi weTik Tok jmelillo165 iri kutariswa zvakanyanya mumavhiki mashoma apfuura. Vhidhiyo yavo inotora zviri kuitika kuchipatara chinonzi haunted.
Muvhidhiyo, tinowana imwe-ruoko yekuona vhidhiyo yekutarisa yakatorwa muimba yekuwachira yechipatara. Pane mutambo wekutamba wezviitiko kubva kumurume anoita kunge ari kuratidza mufananidzo kune waanoshanda naye kekutanga.
Pakutanga, michina yakaturikidzana inoita seyakanaka zvakakwana, asi kamwe kamwe imwe yeshongwe dzacho inokurumidza kushanduka kuva dzinenge 180. Kuwanda kwesimba raizoda kuita izvozvo kunoda simba rakati.
Zvinosimbiswa kuti michina iripo, asi kunyangwe kutenderera kwacho kwaikonzera kumwe kusimuka, kumhanya uye trajectory yemuchina inoita seisingagoneke.
Pane imwe nguva seti yechipiri yemidziyo inofamba ichibva yabuda uye iyo yepamusoro unit inoita sekunge iri kusundirwa kubva pachigadziko chayo nesimba risingaonekwe.
Hatina kuuya kuzokuudza zvokutenda. Asi tichifunga iyi haisiriyo vhidhiyo yekutanga kutorwa kwehumbowo hwehutsinye pachipatara ichi, tinoshamiswa, kutaura zvishoma:
♬ ruzha rwepakutanga - mushandisi7186793655929
Kuti uwane mamwe ghost footage, tinya HERE.